HomeBlogsBlogs HomeHello, Guest! Join Login Latest posts
Tags: 60D+lenses+other accessories for sale
Tags: 60D sale canon lens
shutter count 5000 မကျော်သေးသော တစ်နှစ်ကျော် သက်တန်းရှိ canon 60D တစ်လုံး (9/10)
17-70 f2.8 sigma lens တစ်လုံး
50mm f1.8 lens တစ်လုံး
third party flash ၁လုံး
wireless hotshoe flash triggers and reci
Tags: ကျွန်တော့် ကင်မရာက fujifilm , FinePix HS 20 EXR ပါ အဲ့ဒီကင်မရာရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကိုသိချင်ပါတယ် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်လို setting နဲ့ရိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုတာ သိတဲ့ဆရာများရှိရင်ပြောပေးပါခင်ဗျာ
Tags: Choosing entry lvl camera
Tags: I want to buy an entry level camera, and thinking aout Nikon D3200 or Canon EOS 60D please give your kind suggestions, Thank you.
Photo Art Exhibition & Road Show 2012
Tags: Pride in me
Though being caged,
I will never sing for any food from you!အေးငါက လှောင်အိမ်ထဲက ငှက်ဒါပေမယ့် ငါ့ အသံလေး တစာစာ နဲ့မင်းကျွေးချင်လာအောင် အစာတောင်း သီချင်းတပုဒ် ငါဘယ်တော့မှ မဆိုဘူး။
60 Photographers တို့ရဲ့ Google+ များ စုစည်းထားတဲ့ List ပါ။ 664 days ago
1-10 of 74	Per page: 5